पुरा भिडियो हेर्न फोटो क्लिक गर्नुहोस्? – Sidha Post 24
पुरा भिडियो हेर्न फोटो क्लिक गर्नुहोस्?
म एक १७ वर्षीया युवती हुँ । म विगत पाँच वर्षदेखि पटक पटक बेहोस हुने समस्याबाट पी’डित छु । मेरो यो समस्या को निदानका लागि घरमा धामी झाँक्री बोलाउनेदेखि विभि न्न अस्पतालमा पु¥याएर उपचार गर्ने क्रम अहिले पनि जा री छ । मैले छारे रोगको औषधि पनि से’वन गरिसकेकी छु । तर, मेरो समस्या समाधान भएको छैन ।
सुझाव उपचार हुने युगमा पनि हिस्टेरियाले गर्दा तपाईंले भोग्नुपरेको मानसिक तथा शारीरिक पीडा सुन्दा दुःख लाग्यो । नेपालमा हि’स्टेरिया को बारेमा सर्वसाधारणमा त पर्याप्त भ्रम छ नै, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीमा पनि यो रोगबारे विभिन्न भ्रम रहेको पाइन्छ । स्वास्थ्यकर्मीले नै गलत धारणा सार्वजनिक गर्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सर्वसाधारणको भ्रम हटाउन मुश्किल छ ।
गर्न मन हुने ले मेरो नम्बर लिएर सम्पर्क गर्नु होला !! नम्बर तल छ